သူဌေးဆိုပြီး ဒီလို မပြောနှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သူဌေးဆိုပြီး ဒီလို မပြောနှင့်
သူဌေးဆိုပြီး ဒီလို မပြောနှင့်
Posted by နွေဦး on Nov 27, 2012 in Community & Society, Society & Lifestyle |9comments
မပြောခင် ဆင်ခြင်သင့် နွေဦးအတွေး
ကျွန်တော်တို့ အမြဲကြားနေ ဖတ်နေရတာတွေက “သင့်အလုပ်ရှင်ကို အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံနည်း” “အထက်လူကြီးကို မပြောရသော စကားလုံးများ” စတာတွေဘဲ အတွေ့များပါတယ် ။
ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာ အမြဲတန်း အောက်လက်ငယ်သားဘဲဖြစ်ရမယ်လို့ အတွေးဝင်စေပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်နဲ့ တချိန်မှာ လုပ်ငန်းရှင် ပိုင်ရှင် အထက်လူကြီးတယောက်
ဖြစ်ရမဲ့သူတွေပါ ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ဘယ်လိုပြောဆို ဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းပါ။အဲ…..တကယ်လို့ သင်ဟာ တသက်လုံး အလုပ်သမားတယောက် ဝန်ထမ်းတယောက် ဘဝကနေ တိုးတက် လွတ်မြောက်ဘို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီစာစုဟာ သင့်အတွက် အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်လို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ ။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မန်နေဂျာတွေ ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတဲ့အပေါ်မှာ သတိပြုမိပြီး ကောက်ချက်ချထားတာတွေပါ ။ပြီးပြည့်စုံတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ ။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရ သိလာမယ်ဆိုပေမဲ့ တခါတလေ သတိလက်လွတ်ပြောတတ်ကြတယ် ဆိုတော့ ကြိုတင် သတိရှိစေဘို့ပါ ။
၁။ ။”မင်းတို့ကို လခပေးပြီးခန့်ထားတာ ဒီတော့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုး သူနဲ့ဆင်ဆင်တူ အဓိပ္ပါယ်တူ စကားမျိုးကို ဘယ်တော့မှ မပြောမိပါစေနှင့် ။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ် ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ် ။ ဒီစကားကြောင့် သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မပြီးနိုင်တဲ့အပြင် ပေးနေရတဲ့လုပ်ခလစာဟာလဲ အကျိုးမရှိဖြစ်သွားပါမယ် ။
၂။ ။ “မင်းတို့ ကံကောင်းလို့ ဒီလို အခွင့်အရေးရတာ တခြားကုမ္ပဏီမှာဆို ဒီလိုခံစားခွင့်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူး” ဒီစကားမျိုးကိုလဲ မပြောရဘူး ။အထူးသဖြင့် သင့် ဝန်ထမ်းတွေကို ဆုကြေးခံစားခွင့်တွေ ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာပါ ။ တကယ်တော်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ကုမ္ပဏီအပေါ် စေတနာအပြည့်ရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက်က ဒီစကားမျိုးဟာ ဝန်ထန်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်တယ် ။ပြီးတော့ သူတို့ရတဲ့ခံစားခွင့်ဟာ ရသင့်ရထိုက်တာထက် လျှော့နည်းတယ်လို့လဲ ခံစားရသွားနိုင်တယ် ။
၃။ ။”ငါက မနေ့ညကလည်းရုံးမှာ စနေနေ့လည်းပိတ်ရက်မရှိဘူး မင်းတို့ကဘယ်တွေလျှောက်သွားနေလဲ” ဒီလိုပြောလို့လည်း မရပါဘူး။ လုံးဝ မပြောသင့်တဲ့စကားမျိုးပါဘဲ ။ သာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာ ၂၄နာရီ တာဝန်ယူစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ။ သူ့ကိုဒီလိုတာဝန်ယူခိုင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်စေတဲ့ စကားကြောင့် ကိုယ့်အလုပ် အပေါ် အမြင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ် ။
၄။ ။”အသုံးစရိတ်တွေ သိပ်မြင့်နေတယ် ဒီစရိတ်တွေကို လျှော့ချရမယ်” ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုလဲ ဝန်ထမ်းတွေကို မပြောရပါဘူး ။စရိတ်လျှော့ချမယ်ဆို ဘယ်သူသုံးတဲ့ အသုံးစရိတ်လဲဆိုတာတွေ ပြောစရာဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒီအပေါ်မှီခိုနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကျဆင်းစေတတ်တယ် ။ မျှော်လင့်ချက်ကျဆင်းနေတဲ့ ဝန်ထမ်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာလဲ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ် ။ (အသုံးစရိတ်လျှော့ချတဲ့ကိစ္စမျိုးဟာ မိမိဘာသာဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် )။
၅။ ။”ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ဒီနေရာနဲ့ မတန်ဘူး” ဆိုတာ မပြောရဘူး ။ ချိုးနှိမ်ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ဘယ်အလုပ်သမားကမှ မကြိုက်ကြဘူး ။သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ဟာ သူတို့အပေါ် လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ဆို အလွန်ကြေနပ်ကြပါတယ် ။
၆။ ။”မင်းဆင်ခြေတွေကို နားမထောင်ချင်ဘူး အလုပ်ပြီးတာဘဲလိုချင်တယ်”ဆိုပြီးမပြောမိစေနဲ့ဦး ။သင်ဟာ အလုပ်ရှင်ဖြစ်လို့ ဘယ်အလုပ်သမားရဲ့ ဆင်ခြေပေးတာမဆို နားထောင်ပေးရမဲ့ ဝတ္တရား ရှိနေပါတယ် ။ဖြစ်သင့်တာက ဘယ်ဝန်ထမ်းရဲ့ မှားမှားမှန်မှန် ပေးလာတဲ့ဆင်ခြေတွေကို ဂရုတစိုက် နားထောင်ပေးသင့်တယ် ။ ဒါမှ ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာသိရှိပြီးဖြစ်သွားမှာပါ ။
၇။ ။”ငါတို့ဒီလို လုပ်နေကြဘဲ မင်းလဲဒီအတိုင်းလုပ်”ဆိုပြီးမပြော မခိုင်းပါနဲ့ ။တကယ်လို့ သင့်ဝန်ထမ်းမှာ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း အကြံဥာဏ်တွေ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ် ။သမရိုးကြနည်းကြီးဖြင့် သင့်လုပ်ငန်း မတိုးတက်နိုင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
၈။ ။”မင်းက ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဘဲ”ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကို မပြောပါနဲ့ ။တကယ် ပြင်မရနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုကိုလုပ်ပါ။ပါးစပ်ကဝန်ထမ်းကို တိုက်ရိုက်မပြောမိပါစေနဲ့ ။တကယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာက ဝန်ထမ်းကြောင့်လား ကုမ္ပဏီ ဘက်က လိုအပ်ချက်ကြောင့်လား သေခြာသိအောင်လုပ်ပြီးပြင်သင့်တာကိုပြင်ဘို့လိုပါတယ် ။
၉။ ။”သောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်…တသက်လုံးမင်းသောက်သုံးမကျဖြစ်နေတာဘဲ” ဆိုပြီး ဒေါသကို မထိမ်းနိုင်ဘဲ မပြောမိပါစေနဲ့ ။ဒီလိုစကားဟာ အလုပ်သမားတယောက်ကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတယ် ။အရှက်ရသွားတဲ့ အလုပ်သမားတယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းလာတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိဘို့ပါ။ စားဝတ်နေရေးကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာလုပ်ရပေမဲ့ စေတနာမပါတော့ဘူးဆိုတာသေခြာပါတယ် ။
ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် နေရာတခုမှာ လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ် ဆိုရင်လည်း ဒါလေးတွေကို ရှောင်ပြီးပြောဆို ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်လက်အောက် ငယ်သားတွေရဲ့ လေးစားမှုကိုတော့ခံရနိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ သတိလက်လွတ်ပြောဆိုဆက်ဆံမိတဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကနေ မိမိမသိလိုက်ဘဲ လူ့ချဉ်ဖတ်ကြီးလဲဖြစ်သွားတတ်တာကို သတိပြုမိနိုင်ပါစေ ။
အလုပ်သမားတွေဘက်က စာနာမှု ကိုယ်ချင်းစာမှုတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ နှစ်သက်မိပါတယ် ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား ပြသနာက အလုပ်တိုင်းလိုလို မှာရှိတတ်ကြစမြဲပါ ။ အလုပ်ရှင်ကလည်း ၊ ငါ့ကို ခိုလှုံပြီး အလုပ်လုပ်ရလို့ ၊ ငါ့လက်ခုတ်ထဲကရေဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ အထက်စီးက ဆက်ဆံချင်တဲ့ စိတ်ရှိသူတွေ 80%လောက်များ ရှိမလားပဲ ။ ဒါကြောင့်လည်း တချို့သော အလုပ်ရှင်တွေ အကျိုးကြောင်း အဆိုးကောင်း မနှိုင်းဆပဲ ၊ နှုတ်ဖွာကြတယ် ၊ ပါးစပ်က လွယ်လွယ်လေး စကား တခွန်းကို ထွက်တတ်ကြတယ် ။ ငကန်းသွားလျှင် ၊ ငဆွေလာမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေရှိသူပေါ့လေ ။
အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်း ၊မျက်နှာလွဲခဲပစ်၊ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စား တွေ ရှိတတ်သလို ၊ စကားလုံး အရင့်မာသုံး နိုင်မှ တော်ကာ ကြတဲ့ လူမျိုးလည်း ရှိတာမို့ …… လူမှန် နေရာမှန် မရောက်တဲ့အခါ ၊ အဆင်မပြေတာလေးတွေနဲ့ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ် ။
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း သူများ လခစား အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါပဲ ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အစစအရာရာ၊ သူဌေးစိတ်တိုင်းကျ လုပ်ပေးရင်း တာဝန်ကျေဖို့ စိတ်ထဲ အမြဲ ရှိနေခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် ပါဆယ်နယ်လ်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပုတ်ခတ်စော်ကား နှိုင်းဆပြောတာမျိုးကိုတော့ လုံးဝကို လက်မခံသလို ၊ အကျိုးကြောင်းမခိုင်လုံတဲ့ … မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်း နည်းနည်းမှ ငြိမ်မခံတတ်ပါဘူး ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ …… ဒီနေ့တင် ၊ အပြန်လှန် စကားများခဲ့ပြီးပြီ ။ စကားများတယ်ဆိုတာထက် အပြင်းထန်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ ပြောလျှင် သင့်တော်မလားပဲ ။ အချက်နဲ့ လက်နဲ့ ပြန်ပြောတဲ့အခါ ၊ ဘယ်လောက်သဘောထားပြည့်ဝ ပြည့်ဝ … အထက်စီးက ပါဝါပြချင်တဲ့ စိတ်သဘောလေးတော့ ရင်ထဲ ကိန်းဝပ်နေကြပုံပါပဲ ။ အတွင်းမှာ ကြိတ်ပုတ်ပြီး ၊ ငြိစောင်းကုန်လျှင် အလုပ်ခွင်ထဲ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ …. သူရော ကျွန်မပါ နားလည်ထားလို့ …. နောက်ဆုံးတော့လည်း ၊ သူ့ဘက်ကတထစ်လျော့ပေးသလို ၊ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း လျော့ပေးရင်း ၊ အလုပ်ခွင်ထဲ သာမန်အနေထားနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံရတာပါပဲ ။
နောက်ဆုံးတော့ အလုပ်ရှင်ရော အလုပ်သမားရော အတ္တတွေလျှော့နိုင်ကြရင်အကောင်းဆုံးပါ..။ အလုပ်ရှင်တချို့ကမပြောသင့်တဲ့စကားမှန်းသိသိချည်းနဲ့ ဒေါသအလျောက်ပြောကြတယ်..။
ငါအလုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ မာနတွေ အတ္တတွေနဲ့ မှားမှန်းသိလည်းဆက်ကြဲချင်ကြတယ်..။
မှတ်သားစရာလေးတွေပါပဲ cezer တို့လဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအများဆုံးကြုံတွေ့
နေရတာ ကိုနွေဦးပြောတဲ့အချက်တွေထဲက အကုန်မဟုတ်တောင် တချို့တလေ
တွေကြုံတွေ့ရပါတယ် အထူးသဖြင့် ရေပါတာပဲလိုချင်တယ် ဗူးပေါက်တာမသိချင်
ဘူးဆိုတဲ့ အလုပ်ရှင်မျိုးတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ မetone ပြောသလို လူမှန်နေရမှန်
ဘယ်တော့များမှရောက်မလဲ မျှော်ရတာလဲ အမောပါပဲ အလုပ်ရှင်ကလဲ ငကန်း
သွားငဆွေ လာမယ် အလုပ်သမားက လဲ ကို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မှမဟုတ်တာ လုပ်စရာ
အလုပ်တွေပေါလို့ ခံယူနေသမျှ လူမှန်နေရာမှန်ရောက်ဖို့အလှမ်းဝေးနေအုံးမှာပါ
နက်ရှိုင်းစွာ တည်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာချောမွေ့ပါတယ်။
၀န်ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် တကယ်လိုအပ်ချက်က အထက်လူက
အနှစ်မဲ့တဲ့ အပေါ်ယံလူကြားကောင်းတဲ့ ချိုသာမူ့သက်သက်နဲ့တော့ ယုံကြည်မူ့ရမလာနိုင်ပါဘူးး။
သူတို့ကို အလုပ်ပေါ်မှာ တာဝန်သိစိတ် ရိုးသားစွာလုပ်ဆောင်လိုတဲ့စိတ်
မိမိအလုပ်အပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူလိုစိတ်တွေရိုက်သွင်းပေးနေရင်း က
သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထဲက ဖြစ်သင့်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို တောင်းဆိုပေးနိုင်
ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အထက်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဘို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ခိုင်းတော့ ခိုင်းတတ်တယ် လိုအပ်ချက်ကိုတော့ မသိကျိုးကျွံနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဘဲ ချိုချိုသာသာပြောပြော တစ်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့် ကိုစွန့်ခွာသွားမှာအသေအချာပါဘဲ။
တကယ်တော့ လေးပေါက်ထောက်ပြတဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ မပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အလုပ်တွေဟာ ခိုင်မာဖို့ မလွယ်ပါဘူး။